Mutongo weRufu Wounza Kupesana muMasangano Akazvimirira
Kurume 04, 2013
GWERU — Mumwe mukuru werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti sangano rake riri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro idzva rebumbiro remitemo yenyika, rinosiya kutongerwa kwevanhu rufu kuripo, izvo ranga richipikisa kwenguva yakareba richitsigirwa nemamwe masangano akazvimirira.
Sangano reAmnesty International - Zimbabwe rinoti chimwe chinhu chisiri kurifadza inyaya yekuti mamwe masangano anga achitsigira kubviswa kwemutongo werufu, ava kutsigira gwaro rebumbiro idzva rine mutongo werufu.
Mukuru wesangano iri, VaCousin Zilala, vanoti sangano ravo ragara richikurudzira kuti mutongo werufu ubviswe zvachose.
VaZilala vanoti zvinoshamisa kuti mutemo uyu wakadzoka uri mugwaro rebumbiro remitemo yenyika idzva asi vemapato ose ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemubatanidzwa vachiti havabvumirane nemutongo werufu.
Studio7 yakabvunza vamwe vakuru vakuru vemasangano anoshanda akazvimirira ega kuti sei mamwe emasangano aya ave kushanda neCopac mukukurudzira kuti gwaro rebumbiro idzva remitemo yenyika ritambirwe pareferendamu asi iwo masangano aya akasaina magwaro makore mashoma apfuura achikurudzira hurumende kubvisa mutongo werufu.
Sachigaro weNational Association of Non-Governmental Organisations, VaEffie Ncube, vanoti pane kusawirirana pakati pemasangano aya panyaya yebumbiro idzva remitemo yenyika . Asi vanoti izvi hazvishamise sezvo masangano aya aine zvinangwa zvikasiyana-siyana.
Ukuwo mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coaltition, VaThabani Nyoni, vanobvumawo izvi asi vachiti kunyange hazvo gwaro idzva riine zvimwe zvisingafadzi, maonero emasangano akawanda ndeekuti bumbiro idzva iri riri nani chose pane riri kushandiswa munyika pari zvino.
Mumwe weavo vanotsigira mutongo werufu ndemumwe mudzidzi weMedia and Society Studies paMidlands State University, uyo akangoda kudomwa nezita rekuti Moesha.
Moesha anoti mutemo wekutongera vanhu rufu unofanirwa kuramba uripo nokuti unobatsira kudzivirira kuparwa kwemhosva dzinoita kuti vanhu vatongerwe rufu.
Asi VaZilala vanoti nyika dzakawanda, kusanganisira dzakaganhurana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa neMozambique dzakabvisa mutemo wekutongera vanhu rufu. Vanotiwo Zimbabwe yaive yawana mukana wakanaka wekubvisa mutemo uyu painyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika.
VaZilala vanoti kuti nyika irambe iine mutemo uyu, zvinoratidza kusarira shure nezviri kuitika pasi rose.
Mumwe mudzidzisi muzvidzidzo zverunyararo nebudiroro paZimbabwe Open University, VaTobias Guzura, vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, vanobvumirana nenyaya yekuti nyika dzakawanda dzave kurasa mutemo wekutongera vanhu rufu.
Gore rapera, sangano reZimbabwean Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, rakatsvaga masiginecha evanhu vanodarika miriyoni riine chinangwa chekuti mutongo werufu ubviswe.
Nhengo dzemamwe masangano akazvimirira dzakaisa runyoro rwadzo pagwaro iri, asi dzimwe nhengo dzemasangano aya dzava pamberi mukurudzira kutambirwa kwegwaro rine mutongo werufu.
Kurudziro yekuti mutemo werufu ubviswe yakaitwawo nesangano re Catholic Commission for Justice and Peace kuma 1990s, iro rakatsvagawo masiginecha evanhu richida kuti hurumende ibvise mutongo uyu.
Gwaro rebumbiro idzva richavhoterwa pareferendamu rinobvisa mutongo werufu chete kuvanhukadzi vose pamwe nevarume vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe, uye kuvanhurume vane makore makumi manomwe zvichikwira. Vose vanhurume vane makore ari pakati pemakumi maviri nerimwe kusvika pamakore makumi manomwe vanogona kutongerwa rufu.
Pari zvino munyika mune vanhu makumi manomwe nevatanhatu, kusanganisira vakadzi vaviri, vakatongerwa rufu.
Kubvira mugore ra 2005 nyika yange isina munhu anoita basa rekuuraya vanhu vanenge vatongerwa rufu, uye munhu akapedzisira kuuraiwa mushure mekunge atongerwa rufu, ndi Edgar Masendeke, uyo akauraiwa mugore ra2004.
Vachitaura kuvatori venhau veReuters pakutanga kwaKukadzi, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vakati kupinzwa basa kwakaitwa munhu anoita basa rekuuraya vanhu vanenge vatongerwa rufu, hakurevi kuti vanhu vakataongerwa rufu vave kubva vauraiwa.
Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti kunonoka kuurayiwa kwevanhu ava konogona kuomesera hurumende kana yava kuda kuti vachiurayiwa, kana pakatariswa nyaya yakapikiswa ikabudirira mudare repamusoro soro muna Kurume 1993 nesangano re Catholic Commission for Justice and Peace, iro rakati kunonoka kuurayiwa kwevarume vana vanoti Martin Bakaka, Luke Chiliko, Timothy Mhlanga na John Zacharia Marichi, avo vakanga vatongerwa rufu muna 1987 na 1988, kwaityora kodzero dzavo.
Dare repamusoro soro rakawirirana nazvo, varume ava vakasandurirwa mutongo werufu, vakanzi vagare mujeri kwehupenyu hwavo hwese.
Apo mazuva ereferendamu ari kuswedera, vanhu vakaita saVa Zilala pamwe nemasangano akaita se Zimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender neCatholic Commission for Justice and Peace, vacharamba vachishushikana nezviri kuitwa nemamwe madzisahwira avo akambovatsigira mukuedza kubvisa mutongo werufu, ayo akabuda pachena kuti rwendo rwuno achatsigira bumbiro idzva rine mutongo werufu.